Inkcazo yeShiksa (iYiddish Word)
Unqulo & Umoya Inkcubeko & Abantu
Yintoni iShiksa? (IYiddish Word)
Ngaba unkulunkulukazi we-shiksa into entle?
Efunyenwe kwiingoma, imibukiso yeTV, i-theater, kunye nezinye izilwanyana eziphambili kwiplanethi, igama elithi shiksa liye lithetha nje umfazi ongeyena ongumYuda. Kodwa yintoni imvelaphi yayo kunye nenjongo?
Iintsingiselo kunye neMvelaphi
UShiksa (שיקסע, elibizwa ngokuthi yi-shick-suh) igama eli- Yiddish elibhekisela kumfazi ongeyena ongumYuda onomdla kumntu ongumYuda okanye umntu ongumYuda.
I- shiksa ibonisa "enye" engaphandle kwindoda engamaYuda, umntu onqatshelwe ngokwemfundiso kwaye, ngoko ke, uyayinqweneleka kakhulu.
Njengesi-Yiddish inyibiliki yesiJamani nesiHebhere , i- shiksa ivela kwisihekele zesi Hebhere (שקץ) eguqulela ukuba "yinto enyanyekayo" okanye "isiphako," kwaye yayisetyenziswa ngokuqala ngasekupheleni kwekhulu le-19. Kwakhona kukholelwa ukuba yinkqubo yesibini yegama elifanayo kumntu: shaygetz (שייגעץ). Eli gama livela kwili gama elifanayo lesiHebhere elisithetha "isikizi" kwaye lisetyenziselwa ukubhekisela kwinkwenkwe engeyena ongumYuda.
I- antksissis ye- shiksa yi- shayna maidel, eyaziwayo kwaye ithetha "intombazana enhle" kwaye isetyenziswa kumfazi ongumYuda.
Shiksas kwiPop Culture
Nangona inkcubeko yepop iye yahlula ixesha kwaye iqulethe amagama athile afana ne " shiksakazikazikazi ," i- shiksa ayilona ixesha lokuthanda okanye ukuxhotyiswa. Enyanisweni, kuthathwa njengento yokunyelisa ebhodini kwaye, nangona iinzame zabasetyhini abangamaYuda ukuba "zibuyisele" ulwimi, baninzi bancomela ukuba bangazibonakalisi ngekota.
Njengoko uFiliphu uRoth wathi kwisikhalazo sikaPortoy :
Kodwa i- shikses , ah, i- shikses yinto enye kwakhona ... Bafumana njani bumnandi kangaka , benempilo , banjalo ? Ukugculelwa kwam kwinto abakholelwayo kuyo kungaphezulu kwendlela yokubonga kwendlela abajonga ngayo, indlela abahamba ngayo behleka baze bathethe.
Ezinye zezinto ezibonakala ziphawulekayo ze- shiksa kwisiko lenkcubeko ziquka:
Isicatshulwa esithandwayo esivela kuGeorge Constanza kwiminyaka ye-1990 yomboniso weTV u- Seinfeld : "Unayo i-Shiksappeal. Amadoda angamaYuda athande umxholo wokuhlangana nomfazi ongafani nomama."
Ibhendi Yithi Nayiphi into eyaziwa ngokuba yi " Shiksa, " apho umculi ophetheyo wambuza indlela afika ngayo intombazana engengowamaYuda. Ingqungquthela kukuba waguqukela ebuKristeni emva koko watshata intombazana engengowamaYuda.
Kwisondo kwiSixeko , umYuda uwela kwiCharlotte engeyona yamaYuda kwaye ugqiba ukuguqula kuye.
Mad Men, Law & Order, Glee , The Big Bang Theory , kunye nezinye ziye zaba ne ' shiksa unkulunkulukazi' osebenza ngeendlela ezahlukeneyo zamabali.
Ngenxa yokuba isizukulwana samaYuda senziwa ngokususela kumama ukuya kumntwana, ukuba umfazi ongeyena ongumYuda otshata kwiintsapho ezingamaYuda uye wabonwa njengengozi. Nabani na abantwana abathwalayo ababengeke bathathwe njengamaYuda, ukuze umgca wentsapho uza kuphelisa. Kwamadoda amaninzi amaYuda, isibheno se-shiksa sidlula kakhulu indima yomgca, kwaye ukuthandwa kowomthikazi we " shiksa " we-pop culture kubonisa oku.
Ngamaxesha anamhlanje, izinga lokunyuka kwesantya liye labangela amanye amaYuda ukuba aphinde acinge ngeendlela ezahlukileyo.
Inkqubo yokuguqulwa kweNguqulelo, ekuhambeni komhlaba, wagqiba ngowe-1983 ukuvumela ukuba ilifa lemveli lomntwana lidlulelwe kwicala.
Isikhokelo soMqala kwiMitshato yamaYuda kunye noMtshato
Iminikelo yamaYuda kuMbutho
Iindlela ezili-8 eziphezulu zokubonisa ubumbano kunye namaQumrhu oKhuselo akwaSirayeli (IDF)
Amagama angamaHebhere kumantombazana (LP)
I-Purim Shpiel Kuyo yonke imbali
Amagama angamaHeberu kumaNtombi angamaYuda
Yonke Ngokuphathelele Ukufudumala Kwehlabathi
Inyaniso NgeColombia yabafundi baseSpain
10 Amazwi malunga ne-Auk enkulu
Inqaku leNgcaciso yeMetri
Abaphumeleli beMidlalo ye-Amateur yase-US
I-Hatch Act: Inkcazo kunye neMimiselo yoPhatlozo
Inkcazo yeNkcazo kunye noTshintsho lweeNyunithi
Imibutho yaseCanada Inventor
Ixabiso lokunyuka kweMali-mali lokuThola iMali-mali